…त्यसपछि उनले देवरसंग मिलेर आफ्नै श्रीमानलाइ साइड लगाउने विचार गरिन ! - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com …त्यसपछि उनले देवरसंग मिलेर आफ्नै श्रीमानलाइ साइड लगाउने विचार गरिन ! - खबर प्रवाह
टर्कीका फोटोग्राफर मेहमत असलनले एउटा यस्तो तस्बिर खिचेका छन् जसले धेरैलाई भावुक बनाउन सक्छ । यो तस्विरले भावुक मात्रै बनाउँदैन यसले जीवनमा हारिसकेका मानिसहरुको हौसला बढाउने कामसमेत गर्छ । यो तस्बिर मार्फत् एक बाबु–छोराको प्रेम देखाइएको छ जो असंख्य समस्या र पीडाबीच पनि हाँसिरहेका छन् । यो तस्विरलाई वर्षको सर्वश्रेष्ठ फोटोको रुपमा चुनिएको छ । […]
काठमाडौं । कलाकार भीमा मैनालीका छोरा नुभिव उप्रेतीको घटनामा सं’लग्न भएको अभियोगमा पक्राउ परेका तीन जनालाई अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका फेवातालस्थित बाराही मन्दिरसँगै नविभव मृ’त फेला परेका थिए । उनको तीन युवाले ज्या न लि एको खुलेको हो । सुरुमा प्रहरीले देहत्याग गरेको भन्दै परिवारलाई श’व जिम्मा लगाएको थियो […]
काठमाडौं । एक महिला डाक्टरको जीवन स’माप्त पा’रिएको छ । भारत, उत्तर प्रदेशमा यस्तो घटना भएको हो । त्यहाँको ताजनागरी आग्राको पोश क्षेत्रमा शुक्रवार दिउँसो एक महिला डाक्टरको जीवन स’माप्त पारिएको हो । यो घटनाले सम्पूर्ण क्षेत्रमा स’नस’नी फैलाएको छ । परिवारले टिभी ठिक गर्न आएको अपरेटरमाथि आ’रोप लगाएका छन् । यद्यपि प्रहरीले यस स’म्बन्धलाई […]